तपाईको (सोमबार जेष्ठ ९ गतेको राशीफल ) -
२०७९, ९ जेष्ठ सोमबार ०१:३८ May 23, 2022 clickonLeaveaComment on तपाईको (सोमबार जेष्ठ ९ गतेको राशीफल )
मेष : चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो
अप्रत्याशित यात्रा गलाउने हुन सक्छ जसले तपाईंलाई उन्मादमा पार्न सक्छ। मांसपेशीलाई राहत दिन तेलले आफ्नो शरीर मालिश गर्नुहोस्। मित्रहरू सहयोगी र अत्यधिक मद्दतगार हुनेछन्। आज तपाईंलाई जीवनमा साँचो प्रेमको सम्झना आउँछ. चिन्ता नगर्नुहोस्, समय अनुसार सबै कुरामा परिवर्तन आउँछ, तपाईंको रोमान्टिक जीवन पनि त्यस्तै हो। काममा आजको दिनलाई उत्कृष्ट बनाउन तपाईंको आन्तरिक शक्तिले पनि उत्तिकै सहयोग दिनेछ। आज तपाईंले आफ्नो जोडीलाई कतै घुमाउन लिएर जानु भयो भने, तपाईंहरूको सम्बन्ध अझ राम्रो हुनेछ।
तपाईँको स्वास्थ्यमा समस्या भएकोले एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यमा जान असमर्थ हुनाले केही बाधाहरूको सामना गर्नु पर्ने हुन सक्छ। तर आफुलाई यसबाट छुटाउन आफ्नो तर्कको प्रयोग गर्नुहोस्। भावनात्मक जोखिम तपाईंको पक्षमा हुनेछ। तपाईंको प्रेमीले आज उपहारका साथ केही समयको आशा गर्न सक्छन्। तपाईंले धेरै समय लाभ हुने परियोजनाहरुमा काम गर्नुपर्छ। तपाईंसँग राय मागे नलजाइकन दिनुहोस् किनभने यसको लागि तपाईंको अत्यधिक कदर गरिनेछ। आज, आफ्नो साथीले तपाईंलाई आफ्नो रमाइलो पक्ष देखाउन सक्छ।
तपाईंको सकारात्मक दृष्टिकोणले तपाईंका वरिपरिका मान्छेहरूलाई प्रभावित गर्नेछ। बचाएको पैसा अचल सम्पत्तिमा निवेश गर्नुपर्छ। आफ्नो परिवारलाई उचित समय दिनुहोस्। तिनीहरूलाई तपाईंले ध्यान दिनुहुन्छ भन्ने महसुस गराउनुहोस्। तिनीहरूसँग आफ्नो गुणस्तरको समय बिताउनुहोस्। गुनासो गर्ने कुनै पनि मौका नदिनुहोस्। तपाईंले आफ्नी प्रियतमालाई भेटेपछि रोमान्सले तपाईंको मन ढाक्नेछ। प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाका लागि परीक्षा दिनेहरूले आफुलाई शान्त राख्नु आवश्यक छ। परीक्षाको डरले तपाईं सताओस। तपाईंको प्रयासले निश्चित सकारात्मक परिणाम ल्याउनेछ। आफ्नो जीवनमा आज विवाह सर्वश्रेष्ठ स्थानमा पुग्नेछ।
पिउने बानीबाट छुटकारा प्राप्त गर्नको लागि आज धेरै शुभ दिन हो। तपाईंले रक्सी पिउनु स्वास्थ्यको लागि घातक शत्रु हो भनेर बुझ्नु पर्छ र यसले तपाईंको दक्षता पनि घटाउँछ। तपाईंका परिवारका सदस्यहरूले सानो कुरालाई ठूलो बनाउने प्रयास गर्ने सम्भावना छ। रोमान्सले तपाईंको हृदय र मनमा शासन गर्नेछ। आफ्नो कौशल देखाउन अवसर आज तपाईंसँग हुनेछ। तपाईंको हास्यपूर्ण चरित्र तपाईंको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हुनेछ। आज, आफ्नो जीवनसाथीले तपाईंलाई आफ्नो जीवनको सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरामा सहयोग दिनेछन्।
धार्मिक र आध्यात्मिक चासोको पालना गर्ने आज पनि एउटा राम्रो दिन हो। तपाईंले सबैको मागको याद गर्ने प्रयास गर्नुभयो भने धेरै समस्यामा पर्नु हुनेछ। प्रेम सम्बन्धमा दास जस्तो व्यवहार नगर्नुहोस्। आज तपाईंको मनमा आएका नयाँ पैसा बनाउने विचारको फाइदा लिनुहोस्। अनपेक्षित अतिथिको कारणले तपाईंको योजनामा बाधा पर्ने सक्छ, तर यसले तपाईंको दिन राम्रो हुनेछ।
स्व-सुधार परियोजनाहरूले धेरै प्रकारको फाइदा हुनेछ – तपाईंले आफ्नो बारेमा राम्रो र विश्वस्त महसुस गर्नुहुनेछ। तपाईंमा छिट्टो पैसा कमाउने इच्छा हुनेछ। तपाईंले आफ्नो घरको जिम्मेवारीमा बेवास्ता गर्नुभयो भने तपाईंसँग बस्ने कसैलाई नराम्रो लाग्नेछ। आज तपाईंलाई जीवनमा साँचो प्रेमको सम्झना आउँछ. चिन्ता नगर्नुहोस्, समय अनुसार सबै कुरामा परिवर्तन आउँछ, तपाईंको रोमान्टिक जीवन पनि त्यस्तै हो। कामको सन्दर्भमा आजको दिन धेरै राम्रो देखिन्छ। वैवाहिक जीवनमा धेरै आशाले आज तपाईंलाई दुःखतिर धकेल्न सक्छ।
आराम महत्त्वपूर्ण भएको दिन – हालैमा तपाईंले धेरै मानसिक दबाबको सामना गर्नुभएको छ – त्यसैले मनोरञ्जन र आमोद-प्रमोदले तपाईंलाई आराम गर्न मद्दत गर्नेछ। बाँकी रहेको घरेलू कामले तपाईंको केही समय लिनेछ। कसैले तपाईंको प्रसंशा गर्न सक्छ। तपाईंको नयाँ योजना र उद्यमको बारेमा भागीदारहरू उत्साहित हुनेछन्। आज, आफ्नो साथीले तपाईंलाई आफ्नो रमाइलो पक्ष देखाउन सक्छ।
वृद्ध मानिसहरूले आफ्नो स्वास्थ्यको हेरचाह गर्न आवश्यक छ। परिवार र साथीहरूसँग रमाइलो समय बित्नेछ। वासनाको तीरबाट उम्कने मौका कम छ। पेशावर कार्यमा जिम्मेवारी बढ्ने सम्भावना देखिन्छ। नियमित वैवाहिक जीवनमा, यस दिनले स्वादिष्ट मिठाईको रूपमा कार्य गर्नेछ।
राम्रो स्वास्थ्यको कारण तपाईं खेल प्रतियोगितामा भाग लिन सक्षम हुनुहुनेछ। बचाएको पैसा अचल सम्पत्तिमा निवेश गर्नुपर्छ। पुराना साथीहरू समर्थक र सहयोगी हुनेछन्। तपाईंकी प्रेमीकाको नराम्रो व्यवहारले आज रोमान्समा बाधा पर्नेछ। कठिन मेहनत र उपयुक्त प्रयासले राम्रो परिणाम र पुरस्कार प्राप्त गराउनेछ। आफ्नो जोडीले आज तपाईंलाई जानीबुझी हानि पुर्याउन सक्छ, जसले तपाईंलाई केही समय दुखी राख्न सक्छ।
भौतिक लाभ र विशेष गरेर मानसिक सुदृढताको लागि मनन र योग सुरु गर्नुहोस्। महत्वपूर्ण मान्छेहरू विशेष वर्गका मान्छेलाई केहि धन प्रदान गर्न तयार हुनेछन्। आफ्नो जोडीको स्वास्थ्यले चिन्ता गराउँछ र उनलाई केही चिकित्सा हेरविचारको आवश्यकता पर्नेछ। आज रोमान्सको लागि कुनै आशा छैन। केही कुरा हुन्छ भनेर नपर्खिनुहोस् – बाहिर निस्केर नयाँ अवसर खोज्नुहोस्। आज तपाईंको आफ्नो जोडीसित गम्भीर तर्क हुन सक्छ।
तपाईंले आफ्नो भावना नियन्त्रण गर्नुहोस् र सकेसम्म छिट्टै डरबाट छुटकारा हुनुहोस्, किनकि कार्डमा स्वास्थ्यमा तत्काल प्रभाव पर्ने र राम्रोसँग स्वास्थ्यको आनन्द लिने तपाईंको बाटोमा रहेको अवरोध बढ्ने सम्भावना छ। खर्चमा वृद्धि हुन्छ तर आयमा वृद्धि हुनाले तपाईंलाई तिर्न सजिलो पर्नेछ। नातिनातिनाहरू खुशी गराउने राम्रा स्रोत हुनेछन्। आफ्नो बोलीको नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नुहोस् किनकि तपाईंका कठोर शब्दले अशान्ति फैलाउँछ र आफ्नी प्रियतमासँगको सम्बन्ध बिग्रिन्छ। कसैको व्यावसायिक प्रगति हुनेछ। आज आफ्नो जोडीले कठिन परिस्थितिमा तपाईंलाई सहयोग गर्नमा धेरै चासो नदेखाउन सक्छन्।
तपाईंको मन हालका घटनाहरूले विचलित गर्नेछन्। ध्यान र योग आध्यात्मिक साथै भौतिक लाभको लागि लाभदायी साबित हुनेछन्। अरूलाई प्रभावित गर्ने तपाईंको क्षमताले फाइदा पुर्याउनेछ। विगतका रमाइला सम्झनाहरुले तपाईंलाई व्यस्त राख्नेछ। आज तपाईंले गरेका सबै कामका मेहनतको भुक्तानी हुनेछ। आज, तपाईं आफ्नो जीवनसाथीसँग बाहिर गएर रमाइलो समय सँगै बिताउनु हुनेछ।